M/weynaha Puntland oo walaac ka muujiyey in rabshadaha ka socda dalka Yamen oo ku soo fatahaan Puntland. – Radio Daljir
M/weynaha Puntland oo walaac ka muujiyey in rabshadaha ka socda dalka Yamen oo ku soo fatahaan Puntland.
Juunyo 5, 2011 12:00 b 0
Kampala, June, 05 – M/weynaha Dawladda Puntalnd C/raxmaan Max?ed Faroole oo xalay la kulmay jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan dalka Uganda hadal dheerna halkaasi jeediyey ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in rabshadaha ka socda dalka Yamen ay ku soo fidaan Puntalnd.
Dr. Faroole waxa uu sheegay in boqolaal Itoobiyaan iyo Somali ah ay joogaan Dalka Yamen meesha kaliya ee ay ku soo butaacayaan haddii arrintu faraha ka baxdana ay tahay magaalada Bossaso oo ah magaalada ugu muhiimsan Puntland oo xilliganba dad la ciirciiraysa, sidaas dareedna ay mudan tahay in il gaar ah lagula socdo.
M/weynuhu waxa uu si qoddo dheer uga hadlay xaaladda Puntland gaar ahaan dhinacyada Ammaanka, hormarinta edeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa uu intaasi ku daray in dhaawaan ay Puntland u gudbi doonto nidaamka axzaabta badan oo wahkti dhaw lagu dhawaaqi doono.
Qodobka uu sida gaarka ah u taabtay madaxweynuhu markii uu hadlayey ammaanka ayaa ahaa deegaanka Gal-gala oo dhawr jeer ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo kuwa Max?ed Siciid Atam. Waxaa uu M/weynuhu tilmaamay in dadka ugu badan ee halkaasi ka dagaalamaya ay yihiin dad aan u dhalan deegaanada Puntland.
M/weyne Faroole sheegay in Puntland ay diyaar u tahay mar kasta inay hormuud u noqoto Somalida inteeda kale ayna Puntland lahayd asaaskii dawladda federaalka. Laakiin waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka ee hadda jirta ay caqabad ku yihiin xiriirka labada dhinac.
Dawladda Sucuudiga oo ka odayeysay, xabbad joojinna dhex dhigtay dawladda iyo mucaaradka Yemen.